Akbar မဟာ - ထိုမဂိုဧကရာဇ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
1582 ခုနှစ်တွင်စပိန်ဘုရင်ဖိလိပ္ပု II ကိုအိန္ဒိယမဂိုဧကရာဇ် Akbar ထံမှစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အများဆုံးလူတို့သညျအစဉ်အလာ၏ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှောင်ဖွဲ့လျက်ရှိနေကြသည်နှင့်အမျှ "နှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နည်းလမ်းများကိုအတုယူအားဖြင့် ... လူတိုင်းကသူသည်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်ပြီးအရှင်, မွေးပညာတတ်ခဲ့သည့်အတွက်ဘာသာတရားကိုနောက်လိုက်ဖို့, ၎င်းတို့၏ငြင်းခုံခြင်းနှင့်အကြောင်းရင်းများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ, ဆက်လက်: Akbar ရေးသားခဲ့သည် လူ့ဉာဏ်၏အကောငျးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောအမှန်တရား, ascertaining များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကနေ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဤသို့ဖြင့်၎င်းတို့၏လက်ရာမြောက်သောဟောပြောချက်များနှင့်အခြီးမွှောမျှော်မှန်းချက်ကနေအမြတ်အစွန်း deriving, ရှိသမျှဘာသာတရားများ၏လေ့လာသင်ယူယောက်ျားနှင့်အတူအဆင်ပြေရာသီမှာပေါင်းသင်း။
Akbar မဟာစပိန်ကောင်တာ-ပြုပြင်ခြင်း anti-ပရိုတက်စအလွန်အကျွံအဘို့အဖိလိပ္ပု chided ။ အများအားဖြင့်မူဆလင်များနှင့်ယုဒအမျိုး၏တိုင်းပြည်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဤအချိန်အားဖြင့်ရှိခဲ့စပိန်ရဲ့ကက်သလစ် inquisitors ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်စပိန်အုပ်ချုပ်ဟော်လန်အတွက်အစားပရိုတက်စခရစ်ယာန်တွေဟာသူတို့ရဲ့လူသတ်အာရုံလွှဲအပ်တော်မူ၏။
ဖိလိပ္ပုသည် II ကိုဘာသာရေးသည်းခံဘို့ Akbar ၏ခေါ်ဆိုမှုနာမပြုခဲ့သော်လည်း, သူကတခြားသူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလူတွေဆီသို့မဂိုဧကရာဇ်၏သဘောထားများ၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်။ Akbar ကိုလည်းအနုပညာနှင့်သိပ္ပံသူ၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဘို့အကျော်ကြားသည်။ သေးသေးလေးပန်းချီ, ယက်လုပ်ခြင်း, စာအုပ်-ချမှတ်ခြင်း, သတ္တုဗေဒနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါင်းတို့သည်သူ၏နန်းစံအောက်တွင်ထွန်းကား။
မိမိပညာနှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအဘို့အ famed ဒီဧကရာဇ်, အဘယ်သူသည်အဘယျနညျး ဘယ်လိုသူကမ္ဘာတွင်သမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးသောမင်းတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသလဲ
Akbar ယခုထဲမှာဆင်းဒ်အတွက်အောက်တိုဘာလ 14, 1542 ရက်တွင်ဒုတိယဂိုဧကရာဇ် Humayan နှင့်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်သတို့သမီး Hamida Banu Begum မှမွေးဖွားခဲ့သည် ပါကစ္စတန် ။
ဘိုးဘေးတို့နှစ်ဦးစလုံးမပါဝင်ပေမယ့် Genghis Khan က နှင့် Timur (Tamerlane), မိသားစုဆုံးရှုံးပြီးနောက်ပြေးခဲ့ Babur 's အသစ်ထူထောင်အင်ပါယာ။ Humayan 1555 သည်အထိအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းပြန်လည်မဟုတ်ဘူး။
ပါရှားပြည်ပရောက်၌သူ၏မိဘများနှင့်အတူနည်းနည်း Akbar nursemaids တစ်စီးရီးထံမှအကူအညီနှင့်အတူ, အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိဦးလေးတို့ကကြီးပြင်းခဲ့သည်။
သူကအမဲလိုက်နဲ့တူ key ကိုကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ပေမယ့်ဖတ်ရှုဖို့သင်ယူဘယ်တော့မှ (ကြောင့်သင်ယူမှုမသန်စွမ်းဖို့ဖြစ်ကောင်း?) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သူ၏အသက်တာတစ်လျှောက်လုံး, Akbar သူ့ကိုဖတ်ပြအတွေးအခေါ်, သမိုင်း, ဘာသာရေး, သိပ္ပံနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများအပေါ်စာသားများခဲ့, သူသည်မှတ်ဉာဏ်ထံ၌ကြားရဖူးသောအရာကို၏ရှည်လျားသောကျမ်းပိုဒ်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
1555 ခုနှစ်, Humayan ဒေလီ retaking ပြီးနောက်ရုံလအတွင်းသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ Akbar ဟာတက်ပြီ ဂို 13 နှစ်အရွယ်တွင်ပလ္လင်ကို၎င်း, ( "ဓမ္မရာဇဝင်ဘုရင်") Shahanshah ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိမိအအရွယ်မရောက် Bayram Khan ကသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအုပ်ထိန်းသူနှင့်တစ်ခုထူးချွန်စစ်သည်တော် / နိုငျငံရေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုလုလင်သည်ဧကရာဇ်နီးပါးချက်ချင်းတစ်ကြိမ်ထက်ပိုဒေလီကိုဆုံးရှုံး ဟိန္ဒူ ခေါင်းဆောင် Hemu ။ သို့သော် 1556 ၏နိုဝင်ဘာလဗိုလ်ချုပ်တို့ Bayram Khan ကနှင့် Khan ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သမ္မတအိုဘားမားလွှတ်တော်မှာတှငျငါ Panipat ၏ဒုတိယတိုက်ပွဲမှာ Hemu ရဲ့အများကြီးပိုကြီးတဲ့စစ်တပ်လုပ်ကြံ။ သူကတစ်ဦးဆင်ပေါ်ကနေစစ်တိုက်သို့စီးအဖြစ် Hemu ကိုယ်တိုင်မျက်စိမှတဆင့်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်; ယင်းမဂိုစစ်တပ်ဖမ်းခြင်းနှင့်သူ့ကိုကွပ်မျက်။
သူကအသက် 18 မှာအသက်ရောက်လာသောအခါ, Akbar ဟာ ပို. ပို. overbearing Bayram Khan ကပယ်ချခဲ့သည်နှင့်အင်ပါယာနှင့်စစ်တပ်၏တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ။ Bayram အဆိုပါစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည် ဟာ့ဂ်ျ မက္ကာရန်, အစားသူ Akbar ဆန့်ကျင်တဲ့ပုန်ကန်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ထိုလုလင်သည်ဧကရာဇ်၏တပ်ဖွဲ့များပန်ဂျပ်ရှိ Jalandhar မှာ Bayram ရဲ့သူပုန်များရှုံးနိမ့်; အစားသူပုန်ခေါင်းဆောင်ကွပ်မျက်ခြင်းထက်, Akbar ကရုဏာသူ့ယခင်အရွယ်မရောက်မက္ကာသှားဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဤအချိန်, Bayram Khan ကသွားလေ၏။
သူ Bayram Khan ကရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမှထွက်ခဲ့ပေမယ့်, Akbar နေဆဲနန်းတော်အတွင်းကနေသူ့အခွင့်အာဏာမှစိန်ခေါ်မှုများရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သားကောင် Adham အခွန်ရန်ပုံငွေများ embezzling ခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်မိမိအ nursemaid ၏သား Adham Khan ကခေါ်တော်မူသောသူ, နန်းတော်၌အခြားအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ လူသတ်မှုအားဖြင့်နှင့်သူ၏ယုံကြည်မှု၏သစ္စာဖောက်ခြင်းဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်စိတ်ပူပန်, Akbar Adham Khan ကရဲတိုက်၏ parapets ကနေပစ်ချခဲ့ရပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ကြောင်းအချက် မှစ. Akbar မဟုတ်ဘဲနန်းတော်စိတ်ဝင်စားသည်တစ်ဦး tool ကိုဖြစ်ခြင်းထက်, မိမိတရားရုံးနှင့်တိုင်းပြည်ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။
ထိုလုလင်သည်ဧကရာဇ်ပထဝီမဟာဗျူဟာမြောက်အကြောင်းပြချက်နှင့်ဝေးမြို့တော်ကနေဒုက္ခစစ်သည်တော် / အကြံပေးရမယ့်လမ်းအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးစစ်ရေးချဲ့ထွင်မှုတစ်ခုပြင်းထန်တဲ့မူဝါဒအပေါ်ထွက်ထားကြ၏။ အောက်ပါအနှစ်ထဲမှာ, မဂိုစစ်တပ်နှင့် (အဘယျသို့ယခုပါကစ္စတန်ဖြစ်ပါတယ်အပါအဝင်) မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယအများကြီးအောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု အာဖဂန်နစ္စတန် ။
မိမိအကျယ်ပြန့်အင်ပါယာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Akbar အလွန်ထိရောက်ဗျူရိုကရေစီထူထောင်။ သူကအမျိုးမျိုးသောဒေသများကျော် mansabars, ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ဝန်အဖြစ်ခန့်အပ်; ဤအအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ပြောကြ၏။ ရလဒ်အဖြစ်သူ 1868 သည်အထိဆက်လက်ရှင်သန်လိမ့်မယ်လို့တစ်စုစည်းအင်ပါယာသို့အိန္ဒိယ၏တစ်ဦးချင်းစီ fiefdoms ဖျူးနိုင်ခဲ့သည်။
Akbar, စစ်တိုက်အတွက်တာဝန်ခံဦးတည်သွားစေရန်ဆန္ဒရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရဲရင့်ခဲ့သည်။ သူအဖြစ်ကောင်းစွာ, ရိုင်း cheetah နှင့်ဆင်ကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ Akbar အစိုးရအတွက်ဝတ္ထုမူဝါဒများစတင်ရန်နှင့်ပိုပြီးရှေးရိုးစွဲအကြံပေးနှင့် courtiers ထံမှကန့်ကွက်ကျော်ကသူတို့ကိုအနားမှာရပ်နေရန်ခွင့်ပြုခဲ့ဤသည်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် Self-ယုံကြည်မှု။
အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေ Akbar တစ်ဒဏ်ခံ milieu မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူ့မိသားစုခဲ့ပေမယ့် ဆွန်နီ , သူ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကျူရှင်ဆရာများသည်နှစ်ခုပါရှရှီအာခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးဧကရာဇ်အဖြစ်, Akbar Sulh-e-Kuhl သို့မဟုတ် "လူအပေါင်းတို့အားငြိမ်းချမ်းရေး," သူ၏ပညတ်တရား၏တည်ထောင်သူနိယာမ၏ဆူဖီ concept ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Akbar သည်သူ၏ဟိန္ဒူဘာသာရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့လေးစားမှုပြသ။ 1562 ခုနှစ်တွင်သူ၏ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့သူ Jodha Bai သို့မဟုတ် Harkha Bai မှဖြစ်ခဲ့သည် Rajput Amber ကနေမင်းသမီးလေး။ မိမိအနောက်ပိုင်းမှာဟိန္ဒူမယားများ၏မိသားစုများနှင့်အတူအမျှသူမ၏ဖခင်နှင့်အစ်ကိုတို့သည်မိမိအမွတ်စလင် courtiers မှရာထူးအတွက်တန်းတူအကြံပေးအဖြစ် Akbar ရဲ့တရားရုံးတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း Akbar အမျိုးမျိုးသောတိုင်းရင်းသားနှင့်ဘာသာရေးနောက်ခံ၏ 36 မယားများရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်အရေးကြီးသည်သူ၏သာမန်ဘာသာရပ်များရန်, Akbar 1563 ခုနှစ်သန့်ရှင်းသောဆိုဒ်များကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့် 1564 ခုနှစ်တွင်လုံးဝ jizya, ဒါမှမဟုတ် Non-မွတ်စလင်များအပေါ်နှစ်စဉ်အခွန်ရုပ်သိမ်းတဲ့သူဟိန္ဒူဘုရားဖူးအပေါ်ထားရှိအထူးအခွန်ရုပ်သိမ်း။
တောင်မှပဲသေးငယ်တဲ့တီးဝိုင်းမွတ်စလင်အထက်တန်းလွှာနှင့်အတူတစ်ကြီးမား, အများစုဟိန္ဒူအင်ပါယာအာဏာရ၏လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်များကျော်လွန်ပြီး, သို့သော်, Akbar သူ့ကိုယ်သူဘာသာရေးမေးခွန်းများကိုတခုတခုအပေါ်မှာပွင့်လင်းခြင်းနှင့်စပ်စုစိတ်ကိုခဲ့ရသည်။ သူကအထက်ကိုးကားသည်မိမိစာအတွက်စပိန်၏ဖိလိပ္ပု II ကိုမှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူသည်ဘာသာရေးနှင့်ဒဿနဆွေးနွေးရန်အားလုံးဘာသာတရား၏လေ့လာသင်ယူယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုချစ်၏။ အမျိုးသမီးဂျိန်းဂုရု Champa ထံမှပေါ်တူဂီဂျပန်သို့ယဇ်ပုရောဟိတ်, Akbar ထိုသူအပေါင်းတို့ကနေနားမထောင်ချင်တယ်။
Akbar မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယကိုကျော်ကသူ့အုပ်ချုပ်မှုကိုခဲနှင့်ကမ်းရိုးတန်းမှတန်ခိုးတော်တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တိုးချဲ့ဖို့စတင်ခဲ့သကဲ့သို့, သူသည်ထိုအရပ်၌သစ်ကိုပေါ်တူဂီရှိနေခြင်းကိုသတိပြုမိဖြစ်လာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမှကနဦးပေါ်တူဂီချဉ်းကပ်ခဲ့ပေမယ့် "လူအပေါင်းတို့သည်သေနတ်များလျှံ," သူတို့ကမကြာမီသူတို့မြေယာပေါ်တွင်မဂိုအင်ပါယာများအတွက်စစ်ရေးအရမယှဉ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ပျေါတူဂီအဟာ့ဂ်ျဘို့အာရေဗျမှဘုရားဖူးတင်ဆောင်လာသောအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှထွက်သတ်မှတ်ထားကြောင်းဂိုသင်္ဘောများနှောင့်ယှက်ဖို့မဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်းလဲလှယ်အတွက်, သူတို့ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းမြေရိုးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာအောက်မှာ။ စာချုပ်များ, လုပ်နှစ်ခုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
စိတ်ဝင်စားစရာ Akbar ပင်အပြစ်ပေးဖို့ကက်သလစ်ပေါ်တူဂီနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် အော်တိုမန်အင်ပါယာ ထိုအချိန်ကအာရေဗျကျွန်းဆွယ်ထိန်းချုပ်ထားသော။ အော်တိုမန်ပုဂိုအင်ပါယာကနေနှစ်စဉ်မက္ကာနှင့်မက်ဒီနာအတွက်ရေကြီးမှုဘုရားဖူးများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များသည်သန့်ရှင်းသောမြို့များ၏အရင်းအမြစ်များကိုမြားမြားခဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်အော်တိုမန် Sultan မဟုတ်ဘဲခိုင်မြဲစွာ Akbar သည့်ဟာ့ဂ်ျပေါ်မှာလူတွေမပို့နုတ်ထွက်ကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒေါသထွက်, Akbar အာရေဗျကျွန်းဆွယ် blockading ခဲ့သောအော်တိုမန်ရေတပ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်သူ၏ပေါ်တူဂီမဟာမိတ်များမေးတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲကိုသူ့အဘို့, ပျေါတူဂီစင်းကိုလုံးဝ၏ချွတ်ရှုံးခဲ့ပါတယ် ယီမင် ။ ဒါကမဂို / ပေါ်တူဂီမဟာမိတ်များ၏အဆုံးအချက်ပြ။
Akbar သို့သော်အခြားအင်ပါယာနှင့်အတူပိုပြီးမွဲဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပါရှန်းကနေကန်ဒါဟာ၏မဂိုဖမ်းနေသော်လည်း Safavid အင်ပါယာ 1595 ခုနှစ်, ဥပမာ, သူတို့အားနှစ်ခုမင်းဆက်များ Akbar ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုတစ်လျှောက်လုံးရင်းနှီးစွာသံတမန်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဂိုအင်ပါယာ အမျိုးမျိုးသောဥရောပဧကရာဇ်အပါအဝင်အဖြစ်ကောင်းစွာ, Akbar မှသံတမန်များစေလွှတ်သောထိုကဲ့သို့သောကြွယ်ဝတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလားအလာကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည် ဧလိရှဗက်ကျွန်မ အင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်ဘုရင် Henry IV ။
1605 ၏အောက်တိုဘာလထဲမှာ, 63 နှစ်အရွယ်ဧကရာဇ် Akbar ဝမျးကသြှေးသှတစ်လေးနက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းခံစားခဲ့ရသည်။ သုံးပတ်ကြာနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်သူကလကုန်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဧကရာဇ်မင်း Agra ၏မြို့တော်၌အဆင်းလှသောဂူဗိမာန်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
ဘာသာရေးသည်းခံစိတ်, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒါပေမယ့်တရားမျှတတဲ့ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဘုံ၌တည်နေတဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအကြံထမြောက်ရသောအဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောလစ်ဘရယ်အခွန်မူဝါဒများ Akbar ရဲ့အမွေ အိန္ဒိယ ကဲ့သို့သောအကြာတွင်ကိန်းဂဏန်းများ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်ရှေ့ဆက်ခြေရာခံနိုင် Mohandas ဂန္ဒီ ။ အနုပညာသူ၏မေတ္တာသေးသေးလေးပန်းချီနှင့် grandiose ဗိသုကာအဖြစ်ကွဲပြားအဖြစ်ပုံစံများအတွက်, မဂိုအောင်မြင်မှု၏အမြင့်သင်္ကေတသို့ရောက်လာသောအိန္ဒိယနှင့်ပါရှဗဟိုအာရှ / စတိုင်များ၏ Fusion ကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ Fusion ကို Akbar ရဲ့မြေးဖြစ်သူ, အောက်မှာက၎င်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအထွတ်ရောက်ရှိမယ်လို့ Shah Jahan ဒီဇိုင်းနှင့်ကမ္ဘာကျော် built ခဲ့သူ, Taj Mahal ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အပေါင်းတို့၏အများဆုံး, Akbar မဟာနေရာတိုင်းသည်းခံစိတ်အားနည်းခြင်းမရှိ, Open-စိတ်ကွေကဲ့သို့တူညီသောအရာမဟုတျကွောငျးလူမျိုးအပေါင်းတို့၏အစိုးရသောမင်းတို့ပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်, သူတစ်ဦးအဖြစ်သူသေဆုံးပြီးနောက်ဦးထက်ပိုလေးရာစုနှစ်များစွာဂုဏ်ယူနေပါတယ် အကြီးမြတ်ဆုံးသောမင်းတို့ လူ့သမိုငျး၌တည်၏။
အဘူအယ်လ် fazl ibn မူဘာရက်။ အဆိုပါ ayin Akbary ဒါမှမဟုတ်ဧကရာဇ် Akbar ၏ဌာန။ လူမှုရေးသိပ္ပံ, 1777: မူရင်းရှ, လန်ဒန်ကနေဘာသာပြန်ထားသော။
Alam, တို့သည် Muzaffar နှင့် Sanjay Subrahmanyam ။ "ဒီ Deccan တောင်တန်းနှင့်မဂိုချဲ့, ca. 1600: ခေတ်ပြိုင်ပတ်သ က်. " ဟုအဆိုပါ Orient, Vol ၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးသမိုင်း၏ဂျာနယ်။ 47, အမှတ်3(2004) ။
Habib, နှစ်အရွယ် Irfan ။ "Akbar နှင့်နည်းပညာ," လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်, Vol ။ 20, အမှတ် 9/10 (စက်တင်ဘာ-အောက်တိုဘာ။ 1992) ။
Richards, ဂျွန်အက်ဖ်ကအဆိုပါဂိုအင်ပါယာ, ကိန်းဘရစ်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသတင်းထုတ် (1996) ။
Schimmel, Annemarie နှင့် Burzine K. Waghmar ။ အဆိုပါ မဟာ Mughal ၏အင်ပါယာ : သမိုင်း, အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, လန်ဒန်: Reaktion စာအုပ်များ (2004) ။
Smith ကဗင်းဆင့်အေ Akbar မဟာ Mogul, 1542-1605, အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်: Clarendon Press မှ (1919) ။
အဘယ်ကြောင့်ကလေးမောရှေသည်လက်ဝဲမြစ်၏ Bulrushes တစ်ခြင်းတောင်းထဲမှာခဲ့သလား
ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hayreddin Barbarossa
အဆိုပါအသက်တာနှင့် Marcus Aurelius ၏ခြှနျ
နှစ်ဆယ်ရာစု မှစ.6Key ကိုဥရောပအာဏာရှင်များ
ခြားနားခြင်းများအတွက်အခုလည်း Make လုပ်နည်း
မော်ဒယ်ရာဌာန Description: လေးသရုပ်ဖော်အပိုဒ်
အဆိုပါ 8 Creepiest သိပ္ပံစမ်းသပ်မှု
မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ abstraction ရေးသားခြင်း
တစ်ဦးနီ, အဖြူနှင့်အပြာရောင်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ Play လုပ်နည်း
ဘီလ်ကလင်တန်ဒုတိယသမ္မတ Be နိုင်သလား?
Victoriano Huerta ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ပဋိညာဉ်တရားသစ် vs. ဟောငျးပဋိညာဉ်
စတီဗင်ရေလက်ကြားအတ္ထုပ္ပတ္တိ & Filmography
Hare Krishna ဟိန္ဒူဂါထာ၏ပုံပြင်
ကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦး Be နှင့်တိုင်ပျော်စရာဖူးနိုင်သလား?
Delphi အသုံးပြုခြင်း Creating ကို Windows ဝန်ဆောင်မှု Applications ကို
သမိုင်းမကျောက်ခေတ် Tools များအုပ်စုများနှင့်စည်းမျဉ်းများ